शक्ति, अर्थव्यवस्था र पर्यावरणीय मित्रताशीलताको सन्दर्भमा आधुनिक डीजल इन्जिनमा लगाईएको आवश्यकताहरू उच्च हुँदैछन्। यी आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि, एक राम्रो मिश्रण निर्माण निश्चित हुनुपर्छ। यसको लागि इन्जिनहरू आधुनिक र कुशल ईंन्धन इंजेक्शन प्रणालीसँग सुसज्जित छन्। तिनीहरू केवल उच्च स्प्रेको खर्चमा सानो स्प्रे सुनिश्चित गर्न सक्षम छैनन्, तर सिलिन्डरहरूलाई सँधै इन्जेक्शन टाइम समायोजन र ईन्टरनेटको आपूर्तिलाई पनि समायोजन गर्नुहोस्। यस्तो प्रणाली अवस्थित छ र पूर्णतया सबै ती उच्च आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। यो एक डीजल इन्जिन इंजेक्टर पंप हो । इन्जिनमा प्रत्येक सिलेंडरको लागि यो अलग इन्जेक्शन तत्व हो। भाग एक इलेक्ट्रनिक एकाइ द्वारा नियन्त्रित छ।
नोडको निर्माणको बारेमा ईन्जिनर र ईन्धन पंप एकजुट हुने, यी इन्जिनहरूको धेरै सिर्जनाकर्ता रुडोल्फ डीजल सोचिरहेको थियो।
यसले हामीलाई इन्जेक्शन दबाब बढाउन ईंन्धन रेखाहरू र उच्च-दबाव पाइपलाइनहरू रोक्न अनुमति दिन्छ। तर डीजलका दिनहरूमा अझै पनि त्यहाँ अवस्थित कुनै पनि अवसर थिएन।
डीजल इन्जिन इंजेक्टर पंप एक इन्धन पंप हो र एक इंजेक्टर जो एक एकाइ मा एकीकृत छ। इंजेक्टर्स संग इंजेक्शन पंप को रूप मा, यिनी तत्वों मा आधारित इंजेक्शन केहि कार्यहरु लाई गर्न सक्छन्। प्रणालीले पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्दछ, सही समयमा ईंन्धन मिश्रणको एक निश्चित भाग उद्धार गर्दछ। प्रत्येक दहन कक्ष को लागि एक अलग पंप प्रदान गरिएको छ। यसैले अब तपाई इन्जिनहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जहाँ उच्च-दबाव ईन्धन रेखाहरू छैनन्, जुन इन्जेक्शन पंपको साथ बिजुली एकाइहरूमा छ।
यो इंजेक्शन प्रणाली नयाँ विकास होइन। डीजल इन्जिन इंजेक्टर पम्प 30 बर्ष पछि कारहरुमा स्थापित भएको थियो। पहिलो पटक, डिजाइन, रेल, समुद्र र कार्गो वाहनों को लागि डीजल इन्जिन मा परीक्षण गरिएको थियो। यो सबै प्रविधि एक - सानो गति द्वारा एकताबद्ध थियो। यी इन्जिनहरु को प्रत्येक सिलेंडर को लागि एक अलग पंप को उपस्थिति मा र कम दबाव को लाइनहरु मा इंजेक्शन मा जान्छ। तत्वहरूको लागि अभिनेता pushers र buffers हो।
1944 देखि ट्रकमा क्रमशः यस्तो प्रणालीहरू लागू गर्न थाल्नुभयो। यात्री कारहरूमा - 1988 पछि। 1938 मा, कम्पनी डेट्रोइट-डीजल, जो त्यस पछि सम्बन्धित मोटर्स मोटर्स थिए, पहिलो पहिलो इकाई बनाइयो, जसले डीजल इन्जिनियर्सको पावर इन्जेक्टरहरूको प्रयोग गर्दछ। यस तथ्यको बावजूद कि युएस यूएसमा विकसित गरिएको थियो, यो प्रकारका डिजाइनहरू एसएसएसआरमा पनि विकसित भएका थिए।
पहिलो YAAZ-204 इन्जिन 1947 को सुरुवात अघिल्लो नलिकाहरूसँग सुसज्जित थिए। तर यो साइटहरु डेट्रोइट-डीजल को लाइसेन्स अन्तर्गत उत्पादन गरिएको थियो। यो पावर एकाइ, र त्यसपछि संशोधित छ छ सिलिन्डर इन्जिन 1992 को अघि उत्पादन गरिएको थियो।
1 994मा, डीजल इन्जिन इंजेक्टरहरूको उपकरण र सञ्चालन वोल्टो इन्जिनियर्स द्वारा देखा पर्यो। कम्पनीले यस प्रकारको इंजेक्टरहरूको साथ पहिलो ट्रक FH12 उत्पादन गर्दछ। त्यसपछि उही इकाइहरू उनीहरूको ट्रक "स्क्यानिया" र "इभको" मार्फत सुरू गर्न सुरु हुनेछ।
पहिलो पटक यात्री कारहरू बीच यो प्रणाली "वोल्क्सवैगन" मा प्रयोग भएको थियो। डीजल इन्जिनको "पक्स इन्जेक्टर" "वोक्सवैगन" 1 99 8 मा देखा पर्यो। सन् 1 990मा, यस्तो प्रणालीको इन्जिनले मोटर वाहन बजारको 20% मागे।
त्यसोभए, के एक डीजल इंजेक्टर पंप छ भनेर हेरौं। उपकरण अत्यन्त सरल छ। एकाइको शरीरमा सीधै एक नजल, एक मेटिङ इकाई, र पावर इकाई पनि हुन्छ। यो पावर ड्राइवको कारण, इंजेक्टरको पम्पले पारंपरिक प्रणालीमा केही फाइदाहरू छन्। यसैले, उच्च दबाव को तहत एक दही तरल को गति को समय मा काफी कम छ। हाइड्रोलिक दक्षता बढ्छ र वजन घटाउँछ।
नवीनतम पीढी को नलिकाहरु पर्याप्त उच्च दबाव (2,500 पल्ट सम्म) को उत्पादन गर्न को लागि पंप संग सुसज्जित छ। तिनीहरूले तुरुन्तै ECU को आदेशहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्छन्, जुन बाह्य सेन्सरबाट हालको जानकारी सङ्कलन र विश्लेषण गर्दछ। यी डेटा अनुसार, मिश्रण र इंजेक्शन समय आवश्यक मात्रा निर्धारित हुन्छ। यसले प्रदान गरिएको परिस्थितिका लागि इष्टतम शक्ति मानहरू प्राप्त गर्न सम्भव बनाउँछ। यसको अतिरिक्त, नोड्स डीजल ईंन्धन बचत गर्न मद्दत गर्दछ, जुन वातावरणमा हानिकारक उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्दछ र दौडने इन्जिनबाट शोर घटाउन मद्दत गर्दछ। अन्तमा, उपकरण धेरै कम्पैक्ट छ र सिलेंडर टाउकोमा राख्न सकिन्छ। त्यहाँ तपाइँ पनि अन्य भागहरू र घटकहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।
नुक्सल यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ किनकि सबैभन्दा कुशल मिश्रण निर्माण सुनिश्चित गर्न। यसो गर्नका लागि इन्जिनियरहरूले चरणहरू अनुमान गरेका छन् - यो एक प्रारम्भिक, आधारभूत र अतिरिक्त इन्जेक्शन हो। शुरुआती चरणको क्षणमा प्रारम्भिक दहन दिन्छ, जब काम गर्ने मिश्रणको गुणात्मक संरचना इन्जिनको विभिन्न अपरेसन मोडहरूमा प्रदान गरिएको छ। एक अतिरिक्त एक कण फिल्टर मा पुनरुत्पादन प्रक्रिया को लागि आवश्यक छ ।
एक यांत्रिक इंजेक्टरको सञ्चालनको सिद्धान्त
डीजल इन्जिन इन्जेक्टर पुप सिंधै सी सिलिन्डर टाउकोमा स्थापित हुन्छ। क्याशशाफ्टमा चार विशेष क्यामेरा छन्। तिनीहरू इंजेक्टर ड्राइभ सुरु गर्न सेवा गर्छन्। चट्टान बाहिरीको मद्दतले, बल पनीर को माध्यम ले इंजेक्शन पंप मा स्थानांतरित गरेको छ।
ड्राइभ क्यामेरामा एक विशेष प्रोफाईल छ जसले तीव्र माथिल्लो लिफ्ट प्रदान गर्दछ, र त्यसपछि चट्टान हातको ढिलो कम। जब अन्तिम एक उज्यालो हुन्छ, उफ्रिलो तुरुन्तै थिचिएको छ। यसले सही दबाब सिर्जना गर्दछ। जब चट्टान बिस्तारै कम हुन्छ, फेफ्रिजर माथि जान्छ। यसको कारण, ईंन्धनले कोशिकाहरूमा उच्च बुलबुले बिना हाई फोमको साथमा प्रवेश गर्दछ।
इंजेक्शन को प्रक्रिया बाहिर जान्छ जब कम्प्युटर को solenoid वाल्व देखि नियंत्रण भोल्टेज लागू गरिन्छ।
चलो डीजल इन्जिनको पम्प-इन्जेक्टरको थप विवरणमा विचार गर्नुहोस्। जब, चट्टानको कारवाही पछि, फेफ्रिङ तल चल्दछ, दहनशील मिश्रणले च्यानलहरु द्वारा नलिकाहरुमा प्रवाह गर्छ। जब वाल्व बन्द हुन्छ, डीजल प्रवाह काटिएको छ। दबाव बढ्न सुरु हुन्छ। जब यो 13 मेगावाट सम्म पुग्छ, स्प्रे सुईले वसन्त बललाई परास्त गर्छ। त्यसपछि इंजेक्शनको प्रारम्भिक चरण सुरु हुनेछ।
एकपटक वाल्व खोल्न सुरु भएपछि, पूर्व-चरण समाप्त हुन्छ र ईन्धन मिश्रण आपूर्ति लाइनको माध्यमबाट पार गरिन्छ। दबाब घटाउन सुरु हुन्छ। इन्जिनको अपरेसनको मोडमा निर्भर गर्दछ, एक वा दुई प्रारम्भिक चरणहरू प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
जब पन्चरले तल बढाउँछ, मुख्य इंजेक्शनको चक्र सुरु हुन्छ। वाल्व फेरि बन्द हुन्छ, ईन्धनको दबाव फेरि उठ्छ। जब स्तर 30 मेगावाट पुग्छ, स्प्रे सुईले दबाब बढाउँछ र त्यसबाट उठाउँछ, यसैले इंजेक्शन प्रक्रिया ट्रिगर गर्दछ। उच्च दबाव बढ्छ, अधिक ईन्धन संकुचित हुनेछ। डीजल र हावाको मात्रा जुन सिलिन्डर बढ्न सक्छ।
अधिकतम फिड (र मोटर जब चोटी पावर मोडमा चलिरहेको बेला प्रदर्शन गरिन्छ) 220 मेगावाटको दबावमा प्रदर्शन गरिन्छ। वाल्वले मुख्य इंजेक्शन चरण खोल्छ। दबाव ड्रप, सुई बन्द गर्दछ।
अतिरिक्त इंजेक्शन चरण क्रियान्वित गरिन्छ जब प्लंगरले अगाडी बढाउँछ। यस चरणमा यन्त्रको सञ्चालनको सिद्धान्त मुख्य इंजेक्शनको रूपमा हो। प्राय: एल्गोरिदम दुई चरणहरूमा प्रदर्शन गरिएको छ।
यदि तपाइँ उपकरण इन्जेक्टर पंप टीडीआई डीजल इन्जिनलाई विचार गर्नुहुन्छ भने, यो सेन्सरसँग लैजान सकिन्छ जसले सुई लिफ्टको अनुगमन गर्दछ। सुई को स्थिति नियंत्रण एकाइ को आवश्यकता छ, जहां ईंन्धन पंपहरु इलेक्ट्रनिक रूप मा नियंत्रित हुन्छन्।
जबकि सामान्य रेल प्रणालीमा ब्याट्रि इन्जेक्शन प्रयोग गरिन्छ, इन्जेक्टरको पम्पले लामो रेखाको अभावको कारण उच्च दबावमा ईन्धन मिश्रण प्रदान गर्दछ।
तिनीहरू प्राय: कारको सञ्चालनमा पतन गर्न सक्छन्। यो शास्त्रीय खाना प्रणालीमा एक कमजोर लिङ्क हो। इंजेक्टर पंप दहन कक्ष को अधिक ईंधन को प्रवाह को अनुमति दि्छ। यस अवस्थामा, स्प्रेकिंग अधिक प्रभावकारी हुनेछ। यस्ता इकाइहरूसँग सुसज्जित मोटर्सहरू शक्तिशाली छन्।
यसबाहेक, यस्तो इन्जेक्शनसँग इन्जिनहरू उनीहरूको एनालॉग भन्दा कम कमजोरीको काम गर्छन्। तर "सामान्य रेल" वा इंजेक्शन पंप इंजेक्शन पंपको साथ अझै अझ कम्पैक्ट हुनेछ।
तर त्यहाँ हानि पनि छन्। सबैभन्दा गहन खनिज गुणस्तर ईंधनको लागि उच्च मांग हो। कम से कम क्लोग काम देखि प्रणाली को रोकन को लागि पर्याप्त छ। दोस्रो मिनेट मूल्य हो।
यो सटीक नोड कारखानाको अवस्थाभन्दा बाहिरको मरम्मत गर्न लगभग असम्भव छ। अर्को हानि यो उच्च दबाव को प्रभाव को तहत यो नोड्स अक्सर इन्जिन ब्लक मा लैंडिंग कोटहरु लाई तोडने छ।
इंजेक्टर पंप कसरी सेवा गर्ने?
जाहिर छ, यो नोड्स डीजल को गुणवत्ता को लागि धेरै मांग छ, र यो हाम्रो देश मा उच्च र सीआईएस मा छ। क्रम मा अक्सर यो महंगा तत्व को बदलन को लागि, यो नियमित रूप देखि ईंन्धन, हावा र सबै अन्य फिल्टर को बदलन को लागि सिफारिश गरिन्छ, मूल उपभोग्य किन्ती खरीद।
प्राय: कार मालिकहरूले डिजेक्ट इन्जिनमा इंजेक्टर पम्प कसरी कुन्नी गर्न रुचाउँछन्। विशेषज्ञहरूले रिलिज गर्न सिफारिस गर्दैनन् - यो कुनै इंजेक्टरको लागि राम्रो छैन। फिल्टर को बदलन र सिद्ध ग्याँस स्टेशनहरुमा रिफेल को लागी राम्रो छ।
खडामा धुलाई गर्दा, गरीब-गुणस्तर स्प्रे हुँदै छ भने - अस्थिर अस्थिर र समान समस्याहरू। सुई पूर्ण रूपमा फँसिएको बेला अल्ट्रासोनिक स्नानमा कुञ्जी अनुमति छ। यदि नलाल पल्टिन्छ भने, केहि पनि यहाँ मद्दत हुनेछ। धुलाईको लागि तपाई हालैको लोकप्रिय साधनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ "LAVR" र "विन्स"।
सामान्यमा, यदि इन्जेक्टरले काम गर्दैन भने, यो सुधार को लागी र अन्य भागहरू प्रतिस्थापन गर्न को लागी राम्रो छ। धुलाई मात्र मद्दत गर्दछ यदि साइट कम से कम छ, तर काम गर्दछ।
त्यसोभए, हामीले पत्ता लगाएका डीजल इन्जिनको इंजेक्टर पम्प भनेको हो र यसको उपकरण हो। элемент системы питания дизельных ДВС. तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो डीजल इन्जिन पावर प्रणालीको एक अभिन्न तत्व हो। यसमा एक अधिक टेक्निकल डिजाईन छ, तर यो धेरै ईन्धनको गुणस्तरको माग छ।
ट्रंकमा चटाई कसरी छनौट गर्ने?
मुख्य आगो ट्रकहरू: प्रकारहरू, विशेषताहरू
वायुस्क्रिन वाशर नोजल: भिन्नता, फाइदाहरू र हानिकारक
शुक्नव बटिरखान कमलविच: जीवनी, रचनात्मकता र मृत्युको कारण
Julienne तरकारी। तयारी JULIEN: नुस्खा
कसरी "ट्विटर" साथीहरूलाई तिनीहरूलाई थप्न विवरणहरू
ट्रेडिंग डट्स र Storefronts। सजावट।
"SUPRA" - humidifier: निर्देशन र प्रतिक्रिया
Contouring लागि फिलर "Radiesse" लागूपदार्थको: समीक्षा